Sebewufuna eMabhida umcimbi waMantshontsho | Eyethu News
Sebewufuna eMabhida umcimbi waMantshontsho
“Abantu abaningi abangenanga sekuphele indawo namathikithi.”
UKhuzani Mpungose uqoqe ebezibhekwe ngabomvu kulo mcimbi waMantshontsho. Isithombe: Mthandeni Madlala
ISASASA lomcimbi waMantshontsho kaMaskandi obuse-Inkosi Albert Luthuli Convention Centre (ICC) eThekwini ngoMgqibelo, liphoqe ukuthi wenzelwe enkundleni enkulu ngokuzayo.
Lokhu kulandela ukufika magange kwabantu abebezozibonela abaculi bekhiphana inkani ngokuwola izindondo, okugcine ngokwehla izidlathi abanye bengasawatholi amathikithi ngenxa yokushesha aphele.
Lokhu kuholele ekutheni kungabe kusaba mnandi kulo mcimbi njengoba abangangenanga besebefuna ukususa uthuthuva, abanye bethi bekufanele wenzelwe eMoses Mabhida Stadium hhayi kulesi sakhiwo.
IKZN Eyethu ikhuluma nabebediniwe abangangenanga, abalibeke ngembaba elokuthi lomcimbi awusayidingi indawo esenkabeni yedolobha ngoba yincane kakhulu ukuwumumatha.
Kulo mcimbi obunesasasa bekubhekwe kakhulu izimbangi okungoKhuzani “Indlam’lenze” Mpungose noMthandeni“Igcokama Elisha” Manqele.
BEKUSHIKISHA ufudu emcimbini waMantshontsho kaMaskandi obuse ICC eThekwini okunandise kuwo uShwi, iMfezi Emnyama noMjikijelwa kwachwaza izihlwele
UTimothy Majola umlandeli wala maciko uthe “Kuyamangaza lokhu okwenzekayo singakwazi ukungena njengoba ngisuke eGoli ngizimisele ukuzobona Indlamlenze izothatha izindondo zayo. Lokhu engibona kungeke kusenzeka njengoba ngingaphandle njengamanje,” kubeka uMajola.
Uthe angakujabulela ukubona lomcimbi ezindaweni ezifana nezinkundla zemidlalo ezikwazi ukwanela abantu abaningi.
UThandeka Khuzwayo osuka eMsinga uthe kumdumazile ukungaliboni Igcokama Elisha linqoba njengoba engomunye wabalivotele.
UKhuzani “Indlamlenze” Mpungose uqoqe izindondo ebezibalulekile, okube ngeye“Best Selling, iBest Album” wasonga ngeye “Song of the Year”.
Abanye bavotelwe kanje: Kwi-“Best Newcomer” :USkokela, kwi- “Best Female Group”:Imithente, kwi-“Lifetime Achievement”:UMthalane weMithente, Inkunz’ Emdaka noShwi noMntekhala, -i-“Most Stylish” UMthandeni Manqele, i “Best Collaboration” :Igcokama Elisha noJaiva, i-“Best Female Solo”: Indoni, i-“Best Male Group” Ondabuzekwayo, i-“Best Composer”:UMroza –Kwakhala Nyonini ne- “Best Performance” i- Bahubhe.
UMlamuli Nxele ongumsunguli walomcimbi ubonge abantu ngokuzowuthamela ngobuningi babo, waxolisa kwangangenanga wathi uyezwelana nabo kakhulu.
“Angeke wonke umuntu agcine engenile kodwa sizozama ukuqhamuka namacebo okwenza umhlahlandlela kulo ludaba emcimbini olandelayo,” kusho uNxele.
Akathandanga ukucacisa ngodaba oluhlongozwa yizethameli ngokususwa kwalo mcimbi kule ndawo njengoba ethe “Akukho okuningi esingakuxoxa njengamanje kwazise kuningi esisakusebenza ukuphothula konke ngawo”
Uphonswe eweni ebusuku emuva kokuphangwa imoto